Obama Ndi Osote Vista? | Martech Zone
Ọ bụ n’abalị ahụ tupu ntuli aka nke 2008 ma enwebeghị m ịnụ ọkụ n’obi banyere nhọrọ echi. Enweghị m ike ijide onwe m ma ọ bụrụ na Barack Obama bụ nanị redo nke Vista:
Nnukwu mmefu ego.
Hyped maka mgbanwe.
Nkwa nke kwụsie ike karị.
Mmekọrịta zuru ezu.
Ndị mgbasa ozi na ndị na-akọ akụkọ na-akpọ ya mmeri maka Obama ugbua. N'ime ọnwa ole na ole, m na-eche ma ọ bụrụ na America ga-achọ inwere maka a mebie, ma ọ bụ ọbụna ohere ịgbanwe gaa na a Mac. (McCain, nke ahụ bụ).
Tags: Nhọrọ 2008barack obamantuli akaObama
Nov 3, 2008 na 11:37 PM
Kacha mma tweet nke ụbọchị!
TX 4 ikenye a.
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọrọ ọchị ọchị
Nov 3, 2008 na 11:54 PM
Ndo ndi mmadu, ekwesịrị m ikpochasị ihe ndị a kwuru na post a mgbe ha mebisịrị iwu m kwuru.
Nov 3, 2008 na 11:56 PM
OpenMinded nwere ụfọdụ ezigbo isi. Ikpo ya ukpa nihi na ikwenyeghi bu ihe ama n’amaghi ama. Ahuru m na ihichapu nzaghachi ya mana o ziri ezi. Ebe m bụ onye na-agụ akwụkwọ ebe a afọ abụọ Douglass, amụtala m ntakịrị ihe gbasara gị yana otu ị si ahọrọ iwepụta azịza gị. Ọ dị mma ka ị hapụ ndị ọzọ kwuru nke na-ekwenye naanị na nke gị mana wepu ndị na-anaghị eme ya wee baara ha mba n'ihi ya?
Gị abụghị ezigbo onye ọbịa Douglass na m ga-agụ obere blọọgụ gị n'ọdịnihu. Ndo.
Nov 4, 2008 na 12:24 AM
N'ezie, ekwenyeghị m isi OpenMindedNut ma ọlị. N'ezie, ekwenyere m ha niile ma e wezụga maka mwakpo onwe ya na nke a bụ ọkwa 'akabeghị aka'. Ka o sina dị, akpọghị m ya aku. Ọ kpọrọ onwe ya aku. Ugboro nke abụọ ọ wakporo m mere ka m belata usoro m. Biko gụọ amụma iwu, ọ gbanwebeghị maka ọtụtụ, ọtụtụ ọnwa.
Ọ ga-amasị m ịhapụ gị dị ka onye na-agụ akwụkwọ, mana ghọta na m meghere onwe m maka ndị na-aga agha na ọgụ ahụ. Ana m ewere ụfọdụ n'ime ibu ọrụ ahụ.
Nov 4, 2008 na 12:38 AM
Anaghị m azụta Douglass ahụ. Chose họọrọ ịme ụdị ịkwa emo dabere na aha njirimara. "Aku" nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe. O nwere ike ọ gaghị abụ ihe unu chere na ọ pụtara. Chee ya ihu, i mehiere nke ukwuu na ezighi ezi. Ọdịnaya nke post ya nwere ihe karịa blog gị.
Nna m tufuru ọrụ ya ụnyaahụ nke afọ 32 na osisi. Enweghị ọrụ na-arị elu n’obodo a. Kama ịkwa emo na ime mkpesa banyere ọnọdụ ahụ, ọ́ gaghị enye azịza ya? Gị a Ihọd Ihọd dị ka ndị ọzọ nke anyị. Mkpesa bụ ọrịa na mba a. E wezụga nke ahụ, ị ​​tinyere ya n'ebe ahụ na ị chere na Obama adịghị mma maka mba a - ị malitere post a. Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ gị agụwo ya na nkọwa gị wee wepụ echiche mmadụ.
Ikekwe onye ahụ chere na post gị etozughị n'ihi ọnọdụ dị ugbu a nakwa na ịkwa emo ma ọ bụ ime mkpesa banyere "ihe ga-abịa" bụ ihe ngosi nke etozubeghị nwoke. Enwere ike ịgụ ya n'ụzọ dị iche iche.
Ugbu a abụghị oge dị mma iji kpaa njakịrị maka ntuli aka. Enwere ndị nọ ebe ahụ na-efunahụ ọrụ ha na ụlọ ị maara? Enwere ike idobe gị na ndụ gị ma kwụsie ike mana chee maka 60% ọzọ nke obodo a, ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa nke na-ata ahụhụ n'ihi ọnwa 2 gara aga nke ọdịda akụ na ụba.
Echere m n'ezie na ị ga-ekwe ka ego gị gbochie nke a wee ghara ịgụ n'etiti ahịrị.
Nov 4, 2008 na 12:48 AM
Na-enye OpenMindedNut abamuru nke obi abụọ. Achọrọ m ka ị nye m otu elele ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ isoro m kwurịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na anọghị n'ịntanetị, ejiri m n'aka na ị ga-ahụta echiche m dị iche karịa otu esi esere ya na ebe a.
Ọ bụ ụbọchị dị oke mwute na mba a na mmadụ enweghị ike ịjụ otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ na-enweghị ndị mmadụ na-akparị iwe, iwe na esemokwu. Ọ dị nnọọ mwute, n'ezie.
Nov 3, 2008 na 11:59 PM
Chaị m na-agụ naanị nzaghachi gị na OpenMinded. Nke ahụ bụ azịza dị ala ị nyere ya ma wepụ okwu ya dị njọ. Agaghị m agụ blog gị ọzọ.
Nov 4, 2008 na 12:07 AM
Ndo nụ na Trisha (kpọrọ). Achọghị m ka okwu a gbanwee ka ọ bụrụ ihe nkedo aka ekpe ma ọ bụ aka nri na-adịghị mma nke ihe fọdụrụ na turnedntanetị ghọrọ.
Aha OpenMindedNut bụ 'OpenMinded' na 'Nut'. Emeghị m aha ahụ, ọ mere. M chetaara ya nke ahụ. Ọzọkwa, mwakpo nke onwe ya na post 'akabeghị aka' mebiri iwu kwuru. Ihe ọzọ o mere mere jọgburu onwe ya.
Nov 3, 2008 na 11:18 PM
Just nwere ike ịbụ eziokwu… ka anyị nwee olile anya maka kachasị mma!
Nov 4, 2008 na 9:38 PM
Mkparịta ụka anyị na-egosi m mgbe niile na ị bụ onye nweere onwe ya ọ bụghị nke onye kwuo uche ya ma ọ bụ onye kwuo uche ya. O di nwute na ichoro ime ihe nleghari ochi banyere ndi ochichi. Kwesịrị ịmara ugbu a na ha bụ ndị "nwere mmetụta" na-egosi ya na nzaghachi ha. Ndi mmadu - nwee ntakịrị ekele maka egwuregwu ọchị!
Nov 3, 2008 na 11:22 PM
Ọzọkwa, M ga-arụ ụka na mgba ọkụ si Vista ka XP ga-atụle ihe nkwalite… just my 2 cents. 🙂
Nov 4, 2008 na 12:25 AM
Ahụrụ m okwu ahụ site na OpenMindedNut. Echere m na ọ bụ ezigbo ọkwa. Douglass, nke a abụghị oge ịchị ọchị maka ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị mmadụ nọ na United States na mba ụwa na-enwe nsogbu ego, na-efunahụ ọrụ ha, ụlọ ha.
N'ikwu eziokwu, achọpụtaghị m ihe ọ bụla na-ezighi ezi na nyocha ya. Enyene ndusụk n̄kpọ emi enye ekenen̄erede odot. Gịnị mere i ji wepu ya? Mwakpo ya nwere ike ịbụ n'ihi mbuso agha ị wakporo ya, na-akpọ ya akị. Nke ahụ bụ azịza na-adịghị mma site n'aka gị.
Hụ na o tinyere ụfọdụ echiche n'okwu ya na ọ bụghị otu akara, gịnị kpatara ị ji chụpụ ya? Ndo Douglass ma ekwenyeghi m ebe a. Kpọ ọrụ onye aja ma kpọọ ya "ajọ" bụ akara nke ịnwa ikpuchi echiche gị.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ndị na-agụ blọgụ gị eche na ha enweghị ike ịkọwapụta onwe ha ma ị kpọghị ha aha, yabụ na enweghị ihe kpatara ọtụtụ n'ime anyị iji nye aka ebe a.
Nov 4, 2008 na 12:36 AM
Make na-ekwu okwu dị ezigbo mkpa. Ọlịghị na m na-ekwu na m ga-enyocha OpenMindedNut (Nut WAS na aha ya). Enwere m ekele maka ndị na-asọpụrụ nkwanye ùgwù ebe a ma nwee olileanya na ị ga-anọ gburugburu.
Nov 4, 2008 na 12:59 AM
Ahụrụ m okwu mgbanwe ahụ… kedu ihe ọjọọ banyere ya iji wepu post ahụ? Nt na-enwe oke mmetụta ọsọ ọsọ?
Iwu ya mara nke ọma na mgbe ị na-etinye ihe dị ka nke a, na-atụ anya nzaghachi nke nwere ike ọ gaghị abụ nkwekọrịta gị. Ma iwepu ya, dara ogbenye nke ukwuu ma kwuo na ị nwere ihe ị zoo. Ọ bụrụ n’ịnweghị ike ịnara nkatọ (ma kwuo hoo haa na ị malitere ya), ị gaghị ede ya. Cchọ nyocha ndị gụrụ akwụkwọ gị na uche gị na-ekwu ọtụtụ ihe banyere gị.
Ihe niile OpenMindedNut dere banyere bụ ezigbo eziokwu. Nkwenye Bush nyere bụ nke kachasị dị ala na akụkọ ntolite. Ikekwe ị ga-Google ahụ. Imirikiti mba anaghị enwe mmasị na nwa okorobịa ahụ ma chere na ọ ga-apụ. Anyị chọrọ ịhụ mgbanwe. Enweghị ọrụ na-ebilikwa afọ iri dị elu. Naghị a attentiona ntị? Ka obu na inoghi isi site na isi gi n'okpuru oke okwute na-ele anya ka ihe gbanwee?
Abụ m onye Republican. Emekwara m nnukwu ndudue ịtụ vootu Bush na nke ugboro abụọ ya. Givingghara inye ohere Obama na ide ya na post gị bụ UNAMERICAN. Eleghi anya nke kpatara OpenMindedNut ji jiri okwu “akaghi aka”? Ekwenyere m na ị na-ewerekwa echiche na-ezighi ezi site n'okwu ahụ bụ 'nut'. Bọchị ndị a ya hip ịkpọ mmadụ nut n'ihi na ha "maara" / ọkachamara n'ọhịa ha.
Iji chekwaa ihu, ị kwesịrị itinye okwu ahụ ọzọ wee hapụ ndị mmadụ ka ha gụọ ya. Eziokwu ya na mgbe ụfọdụ eziokwu na-afụ ụfụ. Anyị niile bụ ndị America, ikekwe anyị kwesịrị ịmalite ịme ụdị ya?
Nov 4, 2008 na 1:09 AM
Yikes! Ọ bụghị oge ọchị banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị? You na-agbanyụ TV oge ọ bụla SNL na-agbasa ozi n'otu n'ime skits ha? Doug mere ihe n'echeghị ka o doo ya anya na ntuli aka echi. Amaghị m ihe OpenMinded kwuru, mana amaara m Doug nke ọma ma echeghị ya na ọ ga-enyocha okwu mmadụ n'ihi enweghị nghọta. Edeputara amụma ahụ na Doug na-akwado ya. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Doug, kwụsị ịgụ. Gaa ebe ọzọ, mana olee otu nke ahụ si dị iche na ihe ị na-ama ya ikpe n'onwe gị. Na-ekpebi ka ị na-eme ka ị mata onye ị na-ekwenyeghị na gị. Echiche m bụ na onye ọ bụla nwere nnwere onwe ikwu okwu na mba a, nke ahụ apụtaghị na ha nwere ikike ịnụ ma ọ bụ na m ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ga-enye ha ikpo okwu. Ekwenyere m na post Doug ga-abụ nke dị nfe. Ndị mmadụ kwesịrị izuike ma nwetatụ ntakịrị.
Nov 4, 2008 na 1:14 AM
Ka m nweta ikike a… ruo ugbu a abughi nwata, abụba na ọ dị m mkpa ịga nri, ogbi, onye na-adịghị ike, onye Bush hụrụ n'anya, onye kpọrọ asị Obama, UNAMERICAN, Na-enyocha ndị mmadụ, na-akparị mmadụ, ọ bụghị ọmịiko nye ndị ' Achụọla ọrụ ha, Ana m egwu egwuregwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị… ma etinye m na ndụ m ma kwụsie ike.
Ihe niile n'ihi na m na-eche ma Obama ọ bụ ezigbo ahịa, ma ọ bụ na ọ na-afụ anwụrụ ọkụ dị ka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla m tụrụ aro ma ọ bụ megide.
Chei, unu mara m nke oma!
Nov 4, 2008 na 1:34 AM
Ndị na - agụ akwụkwọ hụrụ ihe ị mere Douglass - mmachi. Edemede ahụ adịghị njọ ma ọlị. I mere ka ọ dị njọ na ọ dị njọ n’anya n’ihi na ọ bụghị nkwekọrịta. Are nọ na-wayyyyyyyyy na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ!
Ọhụrụ a kachasị mma ma gụọ dị ka ị na-anwa ịgbaghara obi amamikpe pụọ na onwe gị na njakịrị. Ndo ma nke a mara mma ngwọrọ!
Nov 4, 2008 na 2:03 AM
Ikwuru nke oma! OMG! Lelee ihu akwukwo a - ekwuputala m ya ka m tinye ya nke oma. Ewepụla m echiche niile m kwenyeghi.
Nov 4, 2008 na 1:18 AM
Chere - nwa ojii na ụdị na amara bụ Vista, na crusty ochie vet bụ Mac? Chaị, nke ahụ bụ ihe atụ azụ kachasị azụ m nụtụrụla.
Nov 4, 2008 na 1:31 AM
Nwere ike ịnwe isi ihe bara uru ugbu a. 🙂
Nov 4, 2008 na 1:25 PM
Naanị ịchụpụ ihe m kwuru:
Nov 4, 2008 na 1:20 AM
TUPU M KWURU A: Abụghị m onye na-akwado McCain ma ọ bụ onye na-akwado Obama.
Mara: Ntụle nnabata nke ọgbakọ ọgbakọ dị njọ karịa ọkwa nnwapụta Bush ugbu a… Kedụ ihe mere afọ abụọ gara aga mgbe ndị mmadụ na-awụli elu na mgbanwee ike na ọgbakọ omebe iwu? Kedu ihe gaara eme ma ọ bụrụ na John Kerry bụ onyeisi oche? Ndi Democrats ga-enwe oghere na White House?
Otu nwoke abụghị maka ọdịda nke ụwa! O doro anya na o mere mkpebi ụfọdụ nwere mmetụta, mana imirikiti ihe mba anyị na-agabiga nwere ike ịbụ nke metụtara mmekọrịta na-asọ oyi nke ike na mmebi iwu nke ndị gọọmentị etiti niile.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ekwenyeghi n'ihe ndị otu abụọ kwuru, ekwuru na OpenMindedNut mebiri iwu nkọwa. Onye na - ede blọgụ nwere ikike ịgụpụta ihe ọ bụla na ndị ọchọrọ. E kwuwerị, onye nwere ebe nrụọrụ weebụ?
Nna, obi adighikwa m uto banyere echi. Obi na-atọ m ụtọ mgbe niile dịka nwatakịrị gbasara echiche nke otu ụbọchị inwe ike ịme ntuli aka… yana nke a bụ mbido ntuli aka nke mbụ m nwere ike ịtụ vootu na ... anya niile dị njọ ma na-akụda mmụọ. Dika ekwuru n’akwukwo Ntughari uche nke ndi kwuo uche ya… o di nwute ihu otutu igwe aturu na ahoro Sheppard na Chief Chief ma ogha acha uhie uhie ma obu acha anụnụ anụnụ.
Nov 4, 2008 na 1:47 AM
Gị enweghị isi. OpenMindedNut emebighị iwu ọ bụla. Dịka m tụbara, ọ nọ n'ime ya nke ọma. Douglass sụgharịrị ya kpamkpam wee họrọ ịpịa ya n'ihi na ọ kwadoghị nkwenye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya. Enweghị ihe ọ bụla dị na post ahụ nke na-enweghị isi. OpenMindedNut kwuru “akabeghị aka”, ọ dị njọ? Emechibidoro Douglass ma bụrụkwa onye nwere nsogbu. Mana nke ahụ abụghị ihe kpatara ihichapụ post ọ bụ?
Imirikiti ndị mmadụ ebe a hụrụ ya Douglass gara n'ihu ịgbachitere onwe ya dị ka a ga - asị na ọ bụ aja. Ọ dị mwute na mwute ma ọ bụrụ na ị jụọ m.
Nov 4, 2008 na 1:57 AM
Gini mere ị na-ekwu na ekwenyeghị m na nkwenye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya? Ekwenyere m kpamkpam n'ọtụtụ ihe o kwuru! Oy. Zuru ugbua… gaa n'ihu.
Nov 4, 2008 na 4:46 AM
Ntughari site na Vista ka XP bu ihe nkwalite, OUCH !! (Ma tinye ya.)
Onye isi ala anyị, Barack Obama. Enwere m obi abụọ banyere Obama ruo mgbe ngwụsị nke oge ọkọchị.
Dị ka ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma, Barack Obama, na akwụkwọ, agaghị adị ka onye nwere ike ịda ọsọ n'ụlọ. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ahụmịhe, ọ dị ka ọ ga - abụ ezigbo onye isi ala, jụụ, ọbụnadị keeled, ezi uche - nwere ọhụụ. NA, nwoke ahụ egosiwo na ya nwere ike igbu ya.
Dị ka ya ma ọ bụ na ọ bụghị, Obama nwere nnukwu, nnukwu atụmatụ na ọhụụ ma gbuo ya nke ọma na ọ ga-ezu oke n'ụzọ zuru oke gafee mba ahụ na afọ 2. Nke ahụ abụghị obere ọrụ nye onye isi ọrụ.
Obama agbanyeghachila mkpọsa maka ọfịs ndọrọ ndọrọ ọchịchị na United States. Dị ka a ika, ọ reson na nwetara traction na votu dị ka ihe ọ bụla na m hụrụ na m ndụ. Ikike Obama nwere ibuli nnukwu ego n'aka mmadụ, obere ndị nyere ya, ntanetị dị ịtụnanya. Nke ahụ bụ eziokwu na enweghị gimmick.
Obama si na amaghi 2 afọ gara aga rue naanị ike dị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị US. Ọ bụrụ na ọ bụ ọchụnta ego, ụlọ ọrụ VC ga na-arịọ ka ọ banye n'usoro oge ya ma ọtụtụ n'ime anyị ga-atụ anya IPO ya.
Obama abụrụla onye mara mma n'okporo ụzọ. Nke ahụ ejeworo ya ozi nke ọma.
Ọ bụrụ na ọ na-achị n'etiti, echere m na ọ ga-abụ onye isi ọfụma na-aga nke ọma.
Nov 4, 2008 na 8:55 AM
Ana m asọpụrụ ihe mkpọsa Obama mere ma kwuo banyere ya na 'egwu' na mkpọsa ya na iji ịntanetị na ahịa ahịa. Ekwenyere m - dị ka ya ma ọ bụ na ọ chọghị - ọ gbanweela etu esi agba ọchịchị na mba a.
Nanị ihe m kwuru na nke a bụ ịtụba ụfọdụ ikekwe (ikekwe mkpebi ọjọọ) n'eziokwu na anyị amaghị n'ezie ihe ọ ga-eme. O meela ọtụtụ nkwa dị ukwuu, mana na nke ọ bụla n’ime ntuli aka 5 m tụrụ vootu, ahụtụbeghị m onye isi ala ka o mezuo nkwa ya.
Nov 4, 2008 na 11:49 AM
Ọmarịcha goofy ihe atụ - wepu nkeji 10 site na nkeji iri na ise ị ma ama.
Nov 4, 2008 na 12:28 PM
Ndo, ị na-enweta ụdị nsogbu a niile. Ruo m na-echegbu onwe m, enwere m mmasị n'ịgụ blọọgụ gị, na ịkwụnye w / gị na iko agwa.
M na-echeta otu oge m nwere echiche wepụrụ na CNET forums na enwere m ezigbo iwe maka ya n'ihi na echere m na m kwuru azịza. Ma na njedebe nke ụbọchị ọ bụ naanị ikwu okwu na weebụsaịtị.
Nọgide na-eme ihe ị na-eme. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị amasị ya; ha nwere ike ịga ije ogologo oge.
Nov 4, 2008 na 2:19 PM
Daalụ Scott! Enwere m ekele maka ị na-eso m kerịta echiche gị na nke a.
Nov 4, 2008 na 12:37 PM
Okwu m na-ekwu maka ndị mmadụ imeghachi omume. Doug enwere m obi uto na ntaneti gi ma chee na ihe nlere anya Vista gi mara nke oma. Ọ bụ ikike gị ịkọwa okwu ma ọ bụrụ na Trish enweghị mmasị na ya, m na-atụ aro ka ọ mee ihe ọ tụrụ egwu ime ma kwụsị ịgụ. Maka ihe ụfọdụ, ọ na - akwụsị ịlọghachi….
Enwere m echiche m ga-achọ ịkọrọ n'agbanyeghị though
Abụ m onye na-akwado Obama mana m ka na-etinye blọọgụ gị na profaịlụ Facebook m naanị n'ihi na, ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe ọchị, mana ọ nweghị onye ga-agọnahụ na enwere ihe egwu na Obama agaghị ebi na akwa ahụ ma ọ bụrụ na ọ banye na White House. Enwere m ike ịgwa gị ihe niile na abụ m otu n'ime egwuregwu bọọlụ basketball kacha mma n'ụwa. Enwere m ike ịgwa gị ugboro ugboro mana olee otu ị ga-esi mara ma ọ bụrụ na ị hụghị m ka m na-apụ n'ụlọ ikpe NBA wee kpọọ egwu.
Ọbụnadị Obama n'onwe ya nwere ike ịma maka 100% ma ọ dị njikere dịka ọ mebeghị ya tupu ma n'ezie ọ nwere obere ahụmịhe ọ bụ nnukwu ihe egwu. Ọ pụtara na anyị ekwesịghị ịkwado ya? Mba, obughi ya, na enwere obi abụọ echere m na ọ ga-abụ nnukwu onye isi ala mana ọ bụrụ na ị gwara m ka m tinye ụlọ m na ya nke ọma, ọ bụ ajụjụ dị iche.
Ọ bụ ya mere na ọchịchị ọdịda anyanwụ niile anyị nwere nkewa nke steeti na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ na-esiri onye ọ bụla ike ịghaba ihe. Enwere m olileanya na obi m niile na Obama na-ebi ndụ kwekọrọ na nkwupụta okwu ya mana otu ihe doro m anya, ọ ga-arụ ọrụ dị mma karịa Bush ma ọ bụ McCain. Abatawo m nkwubi okwu a ọ bụghị n'ihi na enwere m obi ụtọ banyere "Mgbanwe" mana n'ihi na ekwenyere m mgbe m nyochachara iwu ọ bụla na Obama nwere ike ime ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee mmekọrịta dị mma
Nke a bụ echiche m !! Biko ziga ozi ịkpọasị niile na email nke aka m ILoveFreedomOfSpeech@hotmail.com
Nov 4, 2008 na 2:18 PM
Daalụ, Shane. Obi dị m ụtọ na otu onye na-akwado Obama ghọtara ọkwa maka ebumnuche edere ya. Anaghị m achọ ịkọwa ọrụ ahụ ọ rụzuru.
Nov 6, 2008 na 5:46 PM
Echere m na nke a bụ ihe ezi uche dị na ya nke ọma echebara echiche nke m gụrụ gbasara ihe niile? Enwe obi abụọ Obama? arụmụka. eziokwu bụ, ọ dịghị onye maara ihe ọ ga - eme, n'akụkụ abụọ. ọ ka ga-ahụ? .. nke, ekwenyere m, bụ isi okwu Doug. Onye ọ bụla na-agụ blog a maka oge ọ bụla nwere ike ịhụ na Doug nwere ihu ọchị. Rue ka oge a bu oge kwesiri ihe ọchị banyere ihe obula? Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịchị ọchị banyere ndụ na oge nsogbu, mgbe ahụ ana m emere gị ebere. Ọchị na-eme ka ihe niile ka mma. Ọchị bụ n'ezie ọgwụ kacha mma. Naanị b / c anyị na-achị ọchị banyere ihe, ọ pụtara na ị ga-eji ya egwu. Amaara m na nke a bụ eziokwu gbasara enyi m, Doug, n'agbanyeghị na anaghị m ekwenyekarị na ya, na-ekwu okwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. 🙂
Nov 4, 2008 na 3:02 PM
Mgbe ị na-akatọ ndị ọzọ (iji tụnyere Obama na VISTA bụ egwuregwu ọjọọ nke nwekwara ike itinye ya na McCain) ị kwesịrị ịma na ndị ọzọ nwere ike ịdị na-akatọ gị.
Ọ bụrụ na ị gaghị akwụli ya, akatọla ha!
Mkpesa bụ ihe ọjọọ !!!
Nov 4, 2008 na 3:23 PM
Daalụ maka post. Achọpụtara m na ọ na-atọ ọchị. Ndo ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ gị bụ ndị nzuzu. M ga-agụ RSS saịtị a ugbu a, iji nyere aka mefuo ọnwụ.
Nov 4, 2008 na 4:11 PM
Na nzaghachi nye post gị:
Nnukwu ihe dị iche bụ na a naghị ajụ ndị ntuli aka ka ha tinye data ha na ngwa ha niile dị n'ihe ize ndụ, iji mefuo ego na nwelite ma ọ bụ ịmụ usoro sistemụ ọhụrụ. N'ezie, a na-ekwe ha nkwa idozi ụtụ isi ma ọ bụrụ na ha ga-agbanwe otu ngbanwe. Microsoft (ma ọ bụ ndị ọ bụla na-eweta nkà na ụzụ) kwesịrị inwe ya nke ọma.
Na nzaghachi okwu banyere OpenMindedNut:
Ahụtụbeghị m ọkwa ya ma enweghị okwu ọ bụla ma ọ bụghị ikwu na na blọọgụ m, m na-ekpebi ihe posts ga-anọ na ihe posts adịghị. Enwerem nke ya, dika gi nwe nke gi. Na-agba ya ọsọ ka ihe masịrị gị. Aga m agụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị dị ka m hụrụ na ọ dị mma, dịka ndị ọzọ na-agụ gị.
Na nzaghachi ugbu a na ọ bụghị oge maka ihe ọ bụla:
Abụ m onye America. Anaghị m ekwe ka ndị ọzọ gwa m mgbe oge ruru ka m jiri ọnụ m kwuo okwu.
Nọgide na-arụ ọrụ ọma, Douglas.
Nov 4, 2008 na 10:20 PM
M chuckled na nke a… M ghọtara ya maka ihe ọ bụ.
Agbanyeghị na ọ bụrụ na iwe were m, ọ bụ karịa n'ihi ihe ị na-ekwu maka Vista !! M nwere ike na-ndọrọ ndọrọ ọchịchị njakịrị, ma technology njakịrị? Bịanụ! 😉
Nov 5, 2008 na 1:54 AM
Agụla m blog gị kemgbe afọ abụọ gara aga, n’eziokwu, ụjọ na-atụ m n’ihe ị dere. Cchọta onye na - agụ akwụkwọ ibe gị naanị maka na ọ kpọrọ post gị akabeghị aka bụ ihe nzuzu.
Kedu ihe ị tụrụ anya site na post gị? Nke a abụghị ụfọdụ Mac vs. PC parody. Mgbalị ya na ịnwa ịdị jụụ ma na-atọ ọchị. Oge ezighi ezi ime ya DOUGLASS.
Nke a bụ oge siri ike na akụkọ ntolite nke obodo anyị. Ijeri dolla atọ hapụrụ ahịa nha anya ọnwa 3 gara aga. Enweghị ọrụ dị na afọ 10 dị elu. Ndị mmadụ na-efunahụ ọrụ ha, ụlọ ha, ihe onwunwe ha. Banyere ego na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ga na-akụ afọ n’ala. You nọdụ ebe a na-achọ ịkwa emo maka nke a? Wee soro ya na enweghi obi ojoo obodo?
D V KA VP nke nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi, agaghị m akwụ gị ụgwọ!
Nov 5, 2008 na 2:18 AM
M tinyere ihe ntinye na http://www.billkarr.com . Ọ ga-amasị m ka ị gụọ ya ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị gwa ndị mmadụ gụọ saịtị gị gbasara ya.
Ọ bụ ụdị bummer… mana ihe ọ bụla! Aga m emeri ya! Obi ka di m uto!
Nov 5, 2008 na 12:42 PM
Kedu otu mmadụ abụọ na-agụ blog gị maka afọ 2 + si asụpe aha gị ezighi ezi? Ebee ka mgbe ọ bụla ihe ọchị na-aga?
Nov 5, 2008 na 9:55 PM
Agabeghi na blog a n'oge na adighi anya. Kedu ihe hel mere !? Ahụtụbeghị m oke iwe na nkụda mmụọ! Ndi mmadu, wetuo obi ala !!
Nov 6, 2008 na 12:44 PM
Nke a bụ nke mbụ m gara na blog nke Doug. Abịara m ebe a iji nweta enyemaka na ntanetị ọhụrụ foto m. Dịka m nwere ike ịhụ nke ahụ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ugbu a. Ya mere, agwara m onwe m, ONWE, gịnị kpatara na ị gaghị abanye na ya. Akpa, ka m kwuo kwa na anaghị m eso oriri na nkwari ọ bụla. Anaghị m akwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla. Ahụrụ m Dougs n'anya maka Sen. Obama na Vista. Afọ 4 sochirinụ ga-akwado nkwado ahụ. Onwe m, echere m na onye isi ala ọzọ nwere ike bụrụ efere zuru oke nke Onye isi ala ọ bụla kemgbe nnukwu Agha Worldwa, l na ll.
Agụrụ m ọtụtụ post na m ga-ekwupụta otu, ọ bụghị ịkatọ, mana ọ wetara okwu ochie m hụrụ n'anya. Tanya, onye VP nke nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi, kwuru na ọ gaghị akwụ Doug ụgwọ. Okwu a weputara oge niile Kachasị mma na ahịrịokwu a——— ”Achọtara M JIZỌS” Azịza, Amaghị m na o furu efu!
Daalụ Tanya, amaghị m na Doug tinyere akwụkwọ maka ọrụ.
Na mmechi, na-amụnye ndị mmadụ. Ndụ nwere ike gbanwee n'otu ụbọchị taa dịka ọnọdụ akụ na ụba dị ugbu a kwesịrị ịkwado. Ndụ dị mkpụmkpụ, nwee obi ụtọ na ya.
Nov 6, 2008 na 3:44 PM
Ndewo Doug, o bu ihunanya na olile anya ka m na akpoku gi inabata ndi ndu ohuru anyi, Barack kwere nkwa iburu onye isi oche gi. Though dị nkọ ma na-enwu gbaa ma ghọta na GW Bush nọrọ ọtụtụ ihe ma mee obere karịa onye kwuo uche ya.
Usoro mmefu ego nke Obama na-anọchite anya akara aka na ntị oge mbụ maka nkwado o nwere na 64 nde votes, echere m na ọ bụ ndị a kacha enye Onye isi ala. Ekpebiela m ịdị na-emeghe uche n'ihi na ọtụtụ ndị Republican na ndị na-achọghị mgbanwe tụpụtara maka Barack. Na 2012, ị nwekwara ike.
Nov 6, 2008 na 4:09 PM
Enwere m ihe ndị na-esochi, na-esote nhọpụta tinye na Obama ka a hoputara nke ahụ kwuru nke ahụ. O nwere nkwado m, enwekwara m obi ụtọ na mba a emeela ihe dị otú ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Gụọ ihe ndị na-esonụ post. Jiri nkwanye ugwu na ịhụnanya miri emi,